ဗေဒင်ကဏ္ဍ – Thutastar
အိမ်​မှာ အပူ​တွေ ​ဝေးရန်​ ဒီ လိုလုပ်​ပါ…။
အချိူ့​သောအိမ်​​တွေဟာ အိမ်​သား အချင်းချင်း မသင့်​မြတ်​တာ /​ငွေဝင်​သမျှအ​ကြောင်းရှာပြီးကုန်​ကျ​နေတာ /အိမ်​သား​တွေ ကျန်းမာ​ရေးမ​ကောင်းတာ စသည်​ဖြင့်​ တစ်​မျိူးပြီးတစ်​မျိူးဖြစ်​ပြီး အိမ်​ပူ၍ စီးပွားမတက်​ဖြစ်​​နေတတ်​ပါတယ်​။​အောက်​​ဖော်​ပြပါ အစီအရင်​ များကို ပြုလုပ်​ပါ။ နံနက်​၆နာရီတွင်​ဖြစ်​​စေ ည​နေ ၆နာရီတွင်​ ဖြစ်​​စေ လှူဒါန်းပါ။ အ​မွှေးတိုင်​ ၃တိုင်​နှင့်​ ဖ​ယောင်းတိုင်​ ၁တိုင်​ကို အိမ်​​ရှေ့တံခါးဝတွင်​ဖြစ်​​စေ အိမ်​​ရှေ့ဝရံတာတွင်​ဖြစ်​​စေ ခုံအမြင့်​​လေးတစ်​လုံးနှင့်​ ထွန်းညှိပါ။ အိမ်​​စောင့်​နတ်​ ခြံ​စောင့်​နတ်​ မြို့​စောင့်​နတ်​များနှင့်​ အိမ်​ခြံ အတွင်းမှီတင်း​စောင့်​​ရှောက်​​နေထိုင်​ကြ​သော မြင်​အပ်​ မမြင်​အပ်​ သတ္တဝါများ ဘုရားမီးပူ​ဇော်​ရန်​ အလင်းတိုင်​ အ​မွှေးတိုင်​များ လှူဒါန်းပါသည်​။ဤ အိမ်​ ဤခြံတွင်​​နေထိုင်​သူများအားလည်း​စောင့်​​ရှောက်​ပါ ။ စီးပွားတိုးတက်​ရန်​ ကူညီပါ စသည်​ဖြင့်​ ​ပြောဆိုနိုင်​ပါသည်​။ နံနက်​မိုးလင်းသည်​နှင့်​ ပရိတ်​တရား​တော်​များ အိမ်​တွင်​ဖွင့်​ပါ။ အိမ်​ဘုရားကို ဆွမ်း ​ရေချမ်း ​သောက်​​တော်​​ရေ. ​ကော်​ဖီ မုန့်​
1. မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ 10ပုံ 2ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် မိဘများကိုလည်း လှူပါ 2. ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မည်မျှပင် အလုပ်ရူပ်သည် ဖြစ်စေ. တစ်နေ့လျင် 1နာရီမျှလောက် ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ 3. တိရစ္ဆာန် လေးများကို အစားကျွေးပါ။ မိမိတွင် အကျိူးထူးစေရန် မရည်ရွယ်ဘဲ ကြင်နာသနားစိတ်ဖြင့် ခို /ကျီး/ခွေး/ ငါး/ကြောင် အစရှိသည့် တိရစ္ဆာန် လေးများကို အစာကျွေးပါ 4. မည်မျှပင် အလုပ်မအားသည်ဖြစ်စေ. ပုံမှန် ဓိဌာန်တစ်ခု ဝင်ပါ။ ဥပမာ တစ်ရက်လျင် သရဏဂုံကို အခေါက်ရေ
ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်၏ ( ဇူလိုင် 24 ရက်မှ 31 ရက်ထိ) တပတ်စာ ဟောစာတမ်း
Comments Off on ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်၏ ( ဇူလိုင် 24 ရက်မှ 31 ရက်ထိ) တပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေ အားလုံးတို့အတွက် ၊ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်မှ (၃၁) ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သတိပြုရန် ယတြာပြုရန် (၁) ပတ်စာ ဟောစာတမ်း . . အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသော ဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘော ဆောင်သည့် မကောင်းသော ဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော.. မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း)
Comments Off on ယခုနှစ် တနင်္လာ ဗုဒ္ဓဟူး အင်္ဂါ စနေ သားသမီး များ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲကုန်အံ့
– ဗုဒ္ဓဟူး ဗု ဒ္ဓ ဟူး သား သ မီး များ စုတ် ရော စန်း ပါ ပွင့် ကာ ၊ အိမ် ထောင် ကျ ကိန်း ရှိအံ့ အိမ် ထောင် ရှိ က ၊ သား သ မီး ရ တာ ထွန်း ကား အံ့ ၊ ရွေ ရော ငွေ ရော ဝင်ကာ မြဲ အံ့ ၊ အ လှူ အ တန်း များ ပြု ရ လ တ္တံ ၊ လူ မှု
ဆရာကျော်ဆန်းလွင်၏ တပတ်စာ ဟောစာတမ်း (22.7.2018 မှ 28.7.2018 ထိ)
Comments Off on ဆရာကျော်ဆန်းလွင်၏ တပတ်စာ ဟောစာတမ်း (22.7.2018 မှ 28.7.2018 ထိ)
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေး ကံအားနည်းနေသည့် ကာလဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်း ရွှေထည် ကိစ္စရပ်များ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်။ ကြီးကဲသူများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ညစ်ရကိန်း ရှိသော်လဲ ငယ်သူများ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရလိမ့်မည်။ မိမိကံ မှာ အားနဲနေသဖြင့် အစစ သတိထား လုပ်ဆောင်ပါ။ ပညာရေးကံ မညံ့သော်လဲ စိတ်ဆိုးရခြင်း ရန်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ခေါင်မူး ခေါင်းကိုက် ဇက်ကြောတက် ဖြစ်တတ်ပေရာ သတိပြုပါ။ အပူအစပ်များ အလွန်အကျွံ စားရာမှ ဥပါဒ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ အချစ်ရေး ကိစ္စများ မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရမည်၊ ဇနီးဖြစ်သူကြောင့် စိတ်ဖိစီးရတတ်ပါသည်။ အသက် 2, 10, 18, 26, 34,
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ ၇ ရက်သားသမီးများရဲ့ တပတ်စာကံကြမ္မာ ( 22.7.2018 မှ 28.7.2018 ထိ )
Comments Off on ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ ၇ ရက်သားသမီးများရဲ့ တပတ်စာကံကြမ္မာ ( 22.7.2018 မှ 28.7.2018 ထိ )
မိမိရဲ့ တပတ်စာ ကံကြမ္မာကို သိရှိဖို့ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ဗေဒင်ကို ဖတ်ကျိလိုက်ပါ … 👌 ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ဗေဒင်ပညာ အတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဟောစာတမ်း တစ်ခုချင်းစီတွင် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ နှင့် ပြုလုပ်ရန် ယတြာများ ပါဝင်ပါသည်။ မင်းသိင်္ခ ဗေဒင်ဖြင့် မိမိ ကံကြမ္မာကို သာမက မိမိ၏ မိသားစုဝင် ၊ သူငယ်ချင်း ၊ မိတ်ဆွေများ အတွက်လဲ မေးမြန်းနိုင်ပြီး Facebook မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် Share ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကြာသာပတေး သားသမီးများအတွက် ဒီတစ်ပတ် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
Comments Off on ကြာသာပတေး သားသမီးများအတွက် ဒီတစ်ပတ် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ သင် ထင်မှတ် မထားတဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေ အောင်မြင်တာကို ကြုံရကိန်း ရှိနေပါတယ်။ သတင်းကောင်းတွေ ကြားရတတ်တဲ့ အချိန်အခါပါ။ ထူးထူးခြားခြား ဝမ်းသာစရာတွေ ကြုံရတတ်သလို ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးစဉ်ကောင်းတွေ သွားရတတ်ပါတယ်။ ဒီတပတ် ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အတွက် တနင်္လာ သားသမီးတွေကို တိုင်ပင်တာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းတွေ စပ်တူလုပ်ငန်းတွေ လူမျိုးခြားနဲ့ လုပ်မယ် လုပ်ငန်းတွေ ဒီကာလမှာ အခက်အခဲ ရှိတတ်လို့ ခဏစောင့်ပါဦး။ ကား၊ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း အထည်အလိပ် လုပ်ငန်းတွေ ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေး မိတ်ဆွေထံကနေ မထင်မှတ်ဘဲ အကူအညီ ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားကြောင့် စိတ်ဒုက္ခ
ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်၏ ( ဇူလိုင် 16 ရက်မှ 23 ရက်ထိ) တပတ်စာ ဟောစာတမ်း
Comments Off on ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်၏ ( ဇူလိုင် 16 ရက်မှ 23 ရက်ထိ) တပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများ အားလုံးအတွက် ၊ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက်မှ (၂၃) ရက်အတွင်း . ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သတိပြုရန် ယတြာပြုရန် (၁) ပတ်စာ ဟောစာတမ်း . . အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသော ဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘော ဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း)